[Topnews:-] Madaxweyne Farmaajo muxuu maalinka arbacada ku doortay?
Wednesday February 22, 2017 - 16:43:51 in Somali News by Super Admin
Xukunka Arbaco ayuu qabsaday,? xilka Arbaco ayuu la wareegay ?
Caleema saarkiisa wuxuu ku beegay Arbaco ? Waxaan maqlay inuu Ra’isalwasaraha magacabi doono Arbacadda ? inuu baarlamaanka horgeyn doono Arbaco , in golaha Wasiiradda la magacaabi doono maalin Arbaco ah, Baarlamankana wuxuu horgeeyn doonaa Arbaco .
Haddii sidaas ay u dhacdo,oo maalin walba uu Arbaco doorto waxeey isweeydiintu tahay qisadda ku dhex jirta maalinta arbacadda ee ku qasabtay inuu si gaara u doorto ?
Topnews:- Fadeexadii 4aad oo hareeysay Gudoomiyaha Dowladda Fudeed Farmaajo ?
Waagacusub.net - Gudoomiyaha gobolka Banaadir Mr Taabit Cabdi oo Muqdisho looga bixiyay Taabit Gorgoro ayaa fadeexadii afaarad wajahay kadib markii uu ku hungoobay ,oo shaqeeyn waayey amar uu ku mamnuucay in shacabka lacag ku galaan Beerta loo dalxiis tago ee Beerta Nabadda Muqdisho. Full Article
[Topnews:-] Magacyadda Maxaabiista Ethiopia ku wareejisay Kheyre oo si sharciya u dhameeystay Xabsiyadii lagu xukumay ?
Dawladda Itoobiya ayaa ku wareejinaysa Raiisul Wasaare Xasan Cali Khayre Maxaabiis Soomaali ah oo tiradoodu gaarayso 120 Maxbuus, kuwaas oo ku xirnaa Xabsiyo ku yaala Dalkeeda, loona haystay Dambiyo ay ka mid yihiin Aragixisanimo. Full Article
Ugu horeyn Alle ha u naxariisto Siraaji. Waxanan halkan ku cadeynayaa in aan ka xumaaday dhacdadaa lagu waayey wiilka da'da yaraa ee mustaqbalka fiican lahaa. Full Article
23-kii April 2017,Saacadu markeey aheyd 10:30-kii fiidnimo ayey kulan albaabadda u xiran yeesheen guddi ay magacaawdeen Farmaajo iyo Kheyre ,iyadoo kullanka uu ka qeybgalay Fahad Yaasiin Xaaji Dahir. Kulanka ayaa lagu dejiyay qorshe nuxurkiisu yahay sidii lagu wiiqi lahaay awoodda Habargidir iyo Abgaal si gacantooda looga bixiyo gobolka Banaadir . Full Article